Suzy Viola's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Suzy Viola
Salons inodyara yakawanda munzvimbo yavo, vashandi vavo uye nyanzvi, zvishandiso zvavo, uye zvigadzirwa zvavo. Nekudaro, chinhu chimwe chavanowanzoregeredza kuisa mari mavo mushandirapamwe wekushambadzira. Sei vatengi vachigona kuwana yako inonakidza salon neimwe nzira? Kunyangwe kushambadzira kuchigona kuve chinhu chinonyengera kugona, ichiri kugoneka, uye hapana chikonzero chekutyisidzirwa. Kune akawanda mazano ekutengesa akaedzwa uye kuyedzwa masalon anoshanda nemazvo mukukwezva